Gudoomiye Tarsan oo furka tuurtay & Wareeysi aad u xiiso badan oo la la yeeshay (Daawo Muuqaal+Warbixin) !! | Somali - Diaspora
Gudoomiye Tarsan oo furka tuurtay & Wareeysi aad u xiiso badan oo la la yeeshay (Daawo Muuqaal+Warbixin) !!
Dadka Soomaaliyeed lagama dhex waayo xag xagasho iyo hebel baa sidaan ah & qofka umadiisa wax u qabto oo inta badan lagu mucaarado wax qabadkiisa.Waxaa wareeysi aad u xiiso badan la la yeeshay Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo soo gaaray magaalada London ee caasimada dalka Ingiriiska.
Gudoomiye Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo furka tuurtay ayaa waxa uu ka hadlay arimo u badnaa dhanka Amniga magaalada Muqdisho waxaana wareeysigiisa sidoo kale Su´aalo weeydiiyay dad qadka Telefoonka si Live ah u soo galay.
Qodabadii ugu muhiimsanaa ee uu ka hadlay Gudoomiye Tarsan ayaa waxaanu ka xusi karnaa dilkii Wariye Xiis,dhanka musumaasuqa,Raga dareeska ciidamada Dawlada wax ku dhaco,dhanka Dhaqaalaha gobolka Banaadir iyo Madaxda Caalamka kuwooda Dawlada kula shira garoonka Diyaaradaha magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde Airport iyo waliba dadka iska leh Guryaha Qaraxyada Shabaab laga soo abaabulo.
Qaab ahaan hadalada ama Jawaabta Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Mr. Maxamuud Axmed Nuur Tarsan hadii aad si wanaagsan u dhuuxdo hadaladiisa waxaa kuu cadaaneeyso in uu qabtay isbadal fara badan balse wuxuu afkiisa ku qiray in dhanka Musumaasuqa ay Somalia ka gashay 3 sano oo xiriir ah kaalinta 1-aad waxaana sidaas dhoor jeer oo hore shaaciyay hay´adaha ku shuqulka leh ee Caalamka.
Magaalada Muqdisho ayaa marba marka ka dambeeysa waxaa aad u soo wanaagsanaanayo Amniga, ilaha dhaqaalaha iyo guud ahaan dhanka Nolasha Shacabka, waxaana sii yaraanaya Qaraxyadii iyo Xabadihii wiiftada ahaa ee maalin kasta laga dhex maqli jiray gudaha magaalada Muqdisho.
Halkaan Hoos ka Daawo Gudoomiye Tarsan oo Furka Tuurtay
Mid ka mid ah shaqaalaha safaaradda Soomaaliya ee Talyaaniga oo ka hadlay dhismaha la kireeyey & sidii ay wax u dhaceen Remittances Can Help Economies of Poorest Countries Grow